मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी पुरानो लयमा फर्कियो ? - ramechhapkhabar.com
मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी पुरानो लयमा फर्कियो ?
९ असार, काठमाडौं ।
लामो समयपछि मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी आफ्नो पुरानो लयमा फर्किएको छ । जेठ महिनामा संस्थागत अर्थात म्यानपावर कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका २९ हजार ३ सय ८२ जनामध्ये ७ हजार १ सय ४१ जनाले मलेसिया जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
लामो समयपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुलाई आर्थिक भार पार्ने काम गरिरहेको भन्दै जिएसजी, माइग्राम, बायोमेट्रिक, ओएससीलगायतका संस्थाहरु खारेज गरेपछि २०७५ जेठ १४ गते पूर्व श्रम स्वीकृति बन्द गरेको थियोे ।
त्यसयता मलेसियाको रोजगारी प्रभावित भएको थियोे । केही दिनअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ ९किसान०ले मलेसियाको रोजगारी रोकिँदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए । हाल मलेसियामा कामदारको न्युनतम तलब पनि बढेको छ ।
यो पनि..जेठ महिनामा एसओएस म्यानपावर सर्भिसेजले पठाए सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदार विदेश, कति ?
जेठ महिनामा ५ सय ३६ कामदारको श्रम स्वीकृति निकालेको एसओएस म्यानपावर सर्भिसेज प्रा।लि। वैदेशिक रोजगारमा धेरै कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको सूचीको शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।
यस्तै ४ सय ७० जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति निकालेर प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्रा.लि. सूचीको दोस्रो, ४ सय १९ जनाको श्रम स्वीकृति निकालेको मोन्टेज ओभरसिज प्रा.लि. तेस्रो, ३ सय २९ जनाको श्रम स्वीकृति निकालेको देवान कन्सल्ट्यान्ट प्रा.लि. चौथो र २ सय ९९ जनाको श्रम स्वीकृति निकालेको लाइफ इन्टरनेशनल ओभरसिज प्रा.लि. पाँचौं स्थानमा रहेका छन् । जेठ महिनामा संस्थागत अर्थात म्यानपावर कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान २९ हजार ३ सय ८२ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आजको अर्थबाट